कहिलेसम्म दर्शक किनेर ‘स्टार’ बन्ने ?
HOME » कहिलेसम्म दर्शक किनेर ‘स्टार’ बन्ने ?
चलचित्र ‘कृ’ ले दोस्रो दिन दर्शक त पायो तर ती सबै दर्शक आफैं हलसम्म पुगेका थिए वा उनीहरुमध्ये धेरैलाई हलसम्म पुर्याइएको थियो भन्ने प्रश्न यतिखेर उब्जिएको छ । हलमा पुगेकाहरुमध्ये कतिपय प्रायोजित रुपमा त्यहा उपस्थित रहेका उनीहरुसँगको कुराकानीका क्रममा खुल्यो । माहोल बुझ्दा हाउस फुल देखाउन चलचित्र पक्षले निकै पापड बेलेको बुझ्न कठिन थिएन ।
राजधानीमा आईतबार चलचित्र ‘कृ’को विशेष शो राखिएको थियो जहाँ पत्रकार र रंगकर्मीको पनि उपस्थित रहेको थियो । भीड त्यहाँ पनि थामिनसक्नु नै थियो तर दर्शक सबै स्वतस्फुर्त गएका थिएनन् । किनिएका दर्शक पनि बाक्लै भेटिए ।
कार्यक्रममा जब अनमोलको प्रवेश भयो दर्शकलाई हुटिङको लागि आग्रह गरियो । यस्तो आग्रह निकै अस्वभाविक देखिन्थ्यो । स्वाभाविक अनमोलका फ्यान छायाँमा परे प्रायोजित फ्यान हावी भए ।
अनमोल सदाझै बडीगार्ड सहित उपस्थित भएका थिए । केही फ्यान हातमा फुलहरु लिएर बसेका थिए । एक एक गर्दै अनमोलले पनि फ्यनबाट फूल ग्रहण गरेका थिए । अनमोलसँगै चलचित्रकी नायिका अदिती बुढाथोकी र अनुप बिक्रम शाही पनि त्यहा थिए । अनमोललाई हुटिङ गरेपछि अनुप र अदितीलाई पनि हुटिङ गरियो । त्यो हुटिङ पनि प्राकृतिक र स्वाभाविक लाग्दैनथ्यो ।
यसले बुझ्न सकिन्छ हलमा प्रायोजित फ्यान पनि थिए । एकै चलचित्रका तीन फरक फरक कलाकारका फ्यान एउटै हुनु अस्वाभाविक मानिन्छ । अर्थात ती फ्यान किनिएका थिए ।
नेपाली दर्शक र मिडियालाई कहिलेसम्म किन्ने र किनिएका फ्यान देखाएर कहिलेसम्म खल्लो स्टाडम देखाउने ? चलचित्रकर्मीले बुझ्ने कुरा हो कि सधैभरि दर्शक किनेर चलचित्र रिलिज गर्ने हो भने चलचित्र नबनाउँदा पनि हुन्छ । अनमोललाई साच्चिकै मन पराउने दर्शक पनि छन् । उनका अनगिन्ती रियल फ्यानहरु पनि छन् । तर नक्कली फ्यानले 'भ्यालु' पाउँदा सक्कलीलाई पक्कै नराम्रो लाग्नेछ ।